Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay iney u safraan Soomaaliya - Halbeeg News
Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay iney u safraan Soomaaliya
WASHINGTON (HALBEEG)- Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muwaadiniinta u dhashay dalkaasi uga digtay inay u safraan Soomaaliya iyadoo oo Mareykanka uu Soomaaliya ku qiimeeyay wadamada heerka Afraad taas oo laga digo in loo safro.
Mareykanka ayaa sheegay in dhammaan muwaadiniinta Mareykanka looga digayo in ay u safraan Soomaaliya waayo weli waxaa dalkaa ka dhamaan la’ rabshado la xiriira dilal iyo afduubyo ayaa lagu yiri digniinta mareykanka.
“Yaan loo safrin Soomaaliya, waayo waxaa ka jira danbiyo la xiriira burcad badeednimo iyo Argagaxisanimo,” ayaa lagu yiri war ka soo baxay waaxda la talinta arrimaha socdaalka.
“Rabshadaha danbiyada wata sida afduubka iyo dilalka waa wax ka caadi ah Soomaaliya oo ay ku jiraan Puntland iyo Somaliland. Jidgooyooyin sharci darro ah ayaa sidoo kale aad ugu faafsan,” ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay waaxda la talinta arrimaha socdaalka ee Mareykanka.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa intaasi ku dartay in argagaxisadu ay qorsheynayaan afduubyo, qaraxyo iyo weerarro ka dhaca Soomaaliya, iyagoo beegsanaya dekadaha, garoomada diyaaradaha, xarumaha dowladda, hoteelada, maqaaxiyaha, dukaamada, meelaha dadka badan isugu yimaadaan iyo meelaha ay ku kulamaan dadka wadamada reer Galbeedlka ah kasoo jeeda.
“Burcad badeeddu waxa ay ku suganyihiin biyaha Geeska Afrika, gaar ahaan biyaha caalamiga ah ee u dhow Soomaaliya, dowladda Mareykanku ma awooddo in ay gargaar deg deg ah la soo gaarto muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliya maadaama aanay jirin Qunsuliyad rasmi ah oo halkaasi ka shaqeysa,” ayaa lagu yiri warbixintan.
Muwaadiniinta Mareykanka u dhashay ee Soomaaliya u safraya waxaa laga doonayaa in ay ceymis galaan, in ay la tashadaan dadka ay jecelyihiin kalana dardaarmaan xanaaneynta daryeelka carruurta iyo xayawaanaadka ay leeyihiinsidoo kalena hantida ay leeyihiin.” ayaa lagu sheegay hadalkaan.
Doorashadii madaxtinimo ee Koonfur Galbeed waa ay soo idlaatay: maxaa xiga?
Golaha wasiirada Jubbaland oo maanta ansixiyay miisaaniyadda 2019-ka